Njem njem na Njem njem | Ọnụ ego nke ụgbọ ala na onye nlekọta na-emepụta ego
Rụọ ụgbọala anyị na ụgbọala anyị
Anyị na-enye ụgbọ ala ndị ọmarịcha na ịgba chaa chaa iji mee ka ahụmịhe gị dịkwuo mma ma mee ka ị nweta ihe kachasị mma n'oge gị. Ihe kachasị mkpa anyị bụ afọ ojuju gị.
Were ohere iji hụ ụfọdụ nlegharị anya nke Bhubaneswar na gburugburu ya mgbe ị na-eleta Odisha.
1 Dzire ma ọ bụ yiri 850 1500 140 14
2 Egwu ma ọ bụ yiri 1000 1800 160 16
3 BRV ma ọ bụ yiri 1200 2200 200 20
5 Honda obodo 1600 2600 260 25
7 Obi ụtọ 3500 6500 600 55
8 Audi-A3 ma ọ bụ BMW-X1 5000 10000 900 90
Day BATA: 200 maka Sl #1 ka 6, na 300 maka 7 ka 9
Allowance ehihie (22: 00 ka 06: 00 Hrs): Rs. 200 maka Sl # 1 ka 6, na Rs. 300 maka 7 ka 9
Nwunye na-eme ka nkwụsị: Rs. 300 maka Sl # 1 ka 6 na Rs. 400 maka 7 ka 9
Kilomita & awa ga-amalite & mechaa na ebe mgbazinye anyị (Garage Iji Garage)
Mgbe 4 Hrs / 40 Kms kwụsịrị, a na-ahapụ ikikere nke 30 nkeji. Maka ndọtị ọ bụla karịrị nke a na-ekwu, a ga-etinye 8 Hrs / 80 Kms slab. Mgbe emechara 8 Hrs / 80 Kms, ụma KM / Oge Awa ga-akwụ ụgwọ dịka maka Ụtụ Ụgbọ njem.
Ụtụ ịkwụ ụgwọ, ụtụ isi obodo na ebe a na-adọba ụgbọala ga-akwụ ụgwọ dị ka GST n'ezie: 5%.
Maka ọrụ a, a ga-atụle anya ntanetịime 250KMs kwa ụbọchị kalịnda ma ọ bụ ebe dị anya, ọ bụla dị elu. Akwụ ụgwọ ga-adị na KM ọ bụla dị ka ọnụahịa.
Iguzo A / C na-akwụ ụgwọ na Pro-rata.
A ga-emezi tarifu a n'elu ma ọ bụrụ na e nwere nnukwu mmụba na mmanụ ụgbọ ala & ụtụ isi.
Ngwongwo A / C Ọkwá
dịkwa na anyị.
maka nkọwa ndị ọzọ na ozi
OZI NDỊ ADDED ADDED:
Ntuziaka SMS akaghị aka na nkwenye nke ntinye akwụkwọ.
Akpanaka SMS / Mail na-akpaghị aka na nhazi nke ụgbọala & chauffeur tupu 02 awa nke Pick-elu.
Akwụkwọ akụkọ a na-ebi kwa ụbọchị, Obere Mmiri nke Mkpụrụ, Ngwá Agha, Akpa Enyemaka, Igbe Mmiri na Igbe na-ehicha na-enye n'ime ụgbọala niile.
Ugbo ala nile bu ikuku oyi, ndi na-eseghi anwuru, di nma ma di ocha.
Maka ntụrụndụ, Nri, mkpụrụ osisi & ihe ọṅụṅụ ga-eme ndokwa maka ndị nnọchiteanya na-arịọ maka ebubo ọzọ.
Ndị na-anya ụgbọ mmiri na / ma ọ bụ Nnọchite anya n'ọdụ ụgbọ mmiri Pebble nọ na Welcome Placard na ọdụ ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ oloko iji nweta ndị ọbịa na nchịkọta ha.
Sand Pebbles Tours nwere ahụmahụ chauffeur, na-edo onwe ya n'okpuru, ọkachamara ma mara ụzọ na ụlọ ọrụ ndị ọrụ.
Ezigbo Kọkorita Kọmitii zuru ezu na ebe a na-eme ihe ndị chọrọ n'aka ndị ahịa na ihe omume na nzukọ.
Gburugburu ụlọ ọrụ elekere elekere dị maka Ụlọọrụ na njem nlekọta, nlegharị anya, njem nleta na ihe omume pụrụ iche.
Ọrụ pụrụ iche maka ịnya ụgbọ ala dị maka agbamakwụkwọ.
A na-echekwa ihe ndị ọkacha mmasị na-amasị gị na Data-base maka inye ndị ka mma ọrụ na iwu ndị ọzọ.
A ghaghị imepụta ihe ndị dị na ụgbọala n'ihu 24-awa. Otú ọ dị, a pụrụ ịkpọtụrụ Sand Pebbles Operations Desk ma ọ bụrụ na achọrọ ụgbọala ahụ n'ime awa 24.
Mgbe ị na-edebe ndokwa ịntanetị, a ghaghị inye ihe niile edere n'akwụkwọ ahụ.
Ntanetị Ịntanetị na-agbaso ngwa ngwa ịkwụ ụgwọ. Otú ọ dị Govt bara uru. Ụtụ isi, ụgwọ ụtụ ụgwọ, ụgwọ ụgwọ ụgbọ ala na ụgwọ ọrụ nke obodo etiti obodo ga-akwụ ụgwọ site n'aka onye ọrụ n'oge ị na-eji ụgbọ.
Enwere ike ịchọta nkwenye niile site na Sand Pebbles. Sand Pebbles nwere ikike ịkwa ụta maka akwụkwọ ntinye aka dị ka ọchịchọ ndị karịrị njikwa ha.
A ga-akwụ ụgwọ ụgwọ azụmahịa nke 15% nke ụgwọ ịkwụ ụgwọ a ga-akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na a kagbuola akwụkwọ ntinye akwụkwọ 06 awa gara aga. Ozugbo cab dị na Garage, ọnụahịa zuru ezu ka onye ọbịa ga-akwụ.
Mgbe Ntinye Ntanetị Ịntanetị, Ị nwere ike ịlele ọnọdụ gị na ụlọ ọrụ ọrụ 24Hrs anyị.